Ndị nga ahụ a tọhapụrụ, bụ ndị e wetara site n'ụlọ mkpọrọ dị iche iche na steeti ahụ, gụnyere otu onye sitere steeti Ebonyi na otu onye ọzọ sitere steeti Delta, ebe ndị ọzọ bụzị ụmụafọ steeti Anambra.
N'okwu ya oge ọ na-enye ntọhapụ ahụ, gọvanọ Obianọ gwara ndị ahụ ka ha sepu aka n'ime ọjọọ ọzọ, ma dụọ ha ka ha bụrụ ezi ụmụafọ steeti ha na ala Nigeria. O kwere nkwa inye ha nkwàdo pụrụ iche iji wee chọọ ihe ha ga-emere onwe ha wee baara steeti ha na ala Nigeria uru, dịka ha bụ ụmụ okorobịa juputara n'ume na ndụ, ebe ọtụtụ n'ime ha nọgokwara ọtụtụ ahọ n'ụlọ mkpọrọ, nke mere na o nweghịzị ihe ha ji aka.
Na nzaghachi, otu onye n'ime ndị ahụ, bụ maazị Ekele Okeke onye kwuru okwu n'aha ndị otu ya jiri obi ya niile wee too gọvanọ Obianọ maka obi ebere ahụ o gosiri ha, ma kwe ya nkwa na ha agaghị alaghachizị azụ n'ihe ndị ahụ dubàra ha n'ụlọ mkpọrọ. N'ihe gbasaara ego govavọ Obianọ kwere nkwa inye ha iji chọọ ihe ha ha ga-eme; maazị Ekele kwuputara ịtụ n'anya ya na afọ ojuju ha banyere nke ahụ, ma kwe ya nkwa na ha ga-eji nke ahụ wee malite imepụtà ihe a hụrụ anya dịka a kụzigooro ha ọrụ aka dị iche iche n'oge ahụ ha nọ n'ụlọ mkpọrọ.
N'okwu dịka ibe ya, kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na steeti ahụ, bụ maazị C-Don ekwuola hooha na steeti Anambra emerubeghị mmemme ọchịchị onye kwuo uche ya nke ahọ a n'ụzọ kworo ekwo dịka o si eme ya n'oge mbụ. O kwuru na kama nke ahụ, na a hapụrụ ụmụafọ steeti ahụ ka ha were ohere ahụ tụgharịa uche n'ihe ọchịchị onye kwuo uche ya pụtara n'ezie.
Maazị Adịnụba mekwara ka a mara na steeti ahụ emeputala ọtụtụ ihe dị iche iche e ji ama atụ, n'ebe o metụtara inye ụmụ mmadụ erèrè ọchịchị onye kwuo uche ya. Ọ sị na steeti ahụ dị njikere ma na-echesi ike ka gọọmenti etiti kwuo ego ole opekata mpe ọhụụ a ga na-akwụ ndị ọrụ oyibo, maka na Anambra ga-eso na steeti mbụ ga-etinye nke ahụ n'ọrụ.
O kwuru na steeti ahụ bụ naanị steeti bugoorola ụgwọ ọnwa ndị ọrụ ya n'ala Nigeria ma na-akwụkwa ụgwọ ọnwa n'abalị iri abụọ na ise nke ọnwa ọbụla. O kwukwara na otu ọ dị ugbu a, na ndị nọ n'ọkwa Onye Nhazi bụ Director n'ụlọ ọrụ dị iche iche na steeti ahụ amalitela inweta ụgbọ ala ọhụụ, dịka gọvanọ Obianọ kwere na nkwa oge gara aga.
Ọ kpọkuzịkwara steeti ndị ọzọ ka ha ñomiri steeti Anambra n'ọrụ ọma dị iche iche ọ na-abàgide, iji wee hụ na ha nyere ụmụafọ ha erèrè ọchịchị onye kwuo uche ya, ka ya bụ okwu a kpụ n'ọnụ wee gbanye mgbọrụgwụ n'ala Nigeria.